Kpọọ maka Nhọrọ: Egwuregwu Waller-Hunter Initiative nyere maka ndị ndu gburugburu ebe obibi
Kpọọ maka Nhọrọ: Ego enyemaka Waller-Hunter Initiative maka ndị ndu gburugburu ebe obibi
Home Colọ Tech
in Colọ Tech
Ngwa maka Egwuregwu Waller-Hunter Ebumnuche ghere oghe maka ndị na-eto eto na mpaghara gburugburu ebe obibi na mba ndị na-emepe emepe iji gosipụta ike ha niile.
Iji mee ka mgbanwe dị ogologo oge dịrị na ụwa ga-adigide, gburugburu ebe obibi chọrọ nduzi na mmụọ na-agba ume.
Ndị na-eto eto na-arụ ọrụ maka Ọha na Ọha na Ọha (CSO) gburugburu, ọkachasị na mba ndị ka na-emepe emepe, anaghị enwecha ohere ịnweta ikike iduzi n'ọchịchị n'ihi enweghị akụrụngwa maka ụlọ akwụkwọ, ọzụzụ, ma ọ bụ nkuzi aka.
Otu ụzọ o si enye ha ike bụ site n’inye ha obere onyinye iji mụbaa ihe ọmụma ha, ahụmịhe, na ọzụzụ ha. Joke Waller-Hunter Initiative na-achọkwa iwusi ikike na nzukọ ndị otu obodo ike.
Ndị mmeri ga-egosiputa ndekọ egwu dị mma. Iji ruo eru, ị ga-
Dịrị njikere ịnabata echiche nke mmepe na-adigide;
Nwee ezigbo ntọala n'ịrụ ọrụ gbasara nsogbu gburugburu na mmepe;
Gosiputa ikike na ebum n’uche ibu onye ndu n’oru oru gi, dika ibu ihe nkpali na ikwado ndi ozo, iso ndi obodo na aru oru, ibu ndi ohuru na ndi okike;
Kpebisie ike na ị ga-arụ ọrụ gbasara nsogbu gburugburu na mmepe mmepe na mpaghara gị.
Nwee ikike ịkọ maka mmepe nke ikike ọchịchị ha.
Onyinye ndị a dị kwa gburugburu:
Onyinye 10 nke 2.500 Euro
Onyinye 4 nke 5.000 Euro
Onyinye 2 nke 7.000 Euro
Nhazi maka nhọpụta
Onye nhoputa ndi ochichi aghaghi ibu onye mara nwa akwukwo a nke oma ma mara ebumnuche ya na ebumnuche ya ma nwee ike ikwenye ya. Nhoputa onwe-aka abughi ihe Joke Waller-Hunter Initiative nakweere.
Ndi ndoro ndoro ochichi kwesiri ibu ndi umuaka ndi n’aru oru ha ma obu ndi ha na ndi CSO nke gburugburu ya na obodo ndi n’etolite etolite etolite etolite etolite bu ndi gosiputara ikike na mmasi n’iru ikwalite ochichi ha. (Ha na-akọwakarị 'nwata' dị ka ndị dị n'okpuru afọ 35. Agbanyeghị, ọ kachasị na-ezo aka na ndị mmadụ na-arụ ọrụ n'ọkwá dị nta na nzukọ ha nwere ikike na ebumnuche ịmalite ịbụ ọrụ ndu.)
Ngwa maka nhoputa aghaghi ime na Bekee. Ihe omuma enyere gha aghaputa nke oma na oghere ndi enyere na nhoputa. Achọrọ imeju mpaghara niile. Emezughị ịmejupụta fọm ahụ n'ụzọ zuru oke ma ọ nwere ike ime ka nhọpụta ahụ ghara ịdị irè.
Ndị mmadụ si na mba ndị a erughị eru itinye akwụkwọ maka Joke Waller-Hunter Initiative: Australia, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel , Italy, Japan, Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States.
Ntinye aha na-emechi na Tuesday, August 31, 2021. Pịa Ebe a iji nweta ụdị nhọpụta. Maka ama ndi ozo banyere otu esi achoputa nbudata a pdf.
Mmalite Afrịka? Tech N'ihi na anyị Planet Challenge Mmemme 2021
Tinye: Onyinye Pathfinder 2021 maka Innovation na Conservation Nature
Tinye! WGC's Gender-Just Climate Solutions Award 2021 (€ 2000 & Njem gaa Scotland)